बाओस, इक्वेडरमा लुकेका मोती | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | इक्वेडर, के हेर्ने
इक्वेडर यो एउटा सानो देश हो तर एक अद्भुत भूगोलको साथ र न्यानो मानिसहरू जसले पर्यटकहरू कसरी प्राप्त गर्ने जान्छन्। तुंगुरहुआ प्रान्तको एउटा उपत्यकामा लुकेको शहरलाई औपचारिक रूपमा भनिन्छ पवित्र पानी स्नान जसमा व्यक्तिहरू केवल भन्छन् बाथरूम.
यदि तपाईंलाई गतिविधिहरू मनपर्दछ बाहिर, राफ्टि,, ट्रेकिंग, हाईकिंग, बर्ड वाचिंग र त्यस सबै प्रकारको कुरा बाओस इक्वेडरियाका गन्तव्यहरू मध्ये एक हो जुन हामी ACTualidad Viajes बाट सब भन्दा सिफारिस गर्दछौं।
1 पवित्र पानी स्नान
2 बाओसमा के गर्ने
3 बाओसमा अरू के गर्ने
पवित्र पानी स्नान
यो अद्भुत ठाउँ हो जहाँ करीव १ thousand हजार मानिस बस्छन्। प्रत्यक्ष पर्यटन बाट र यो ज्वालामुखीको टुप्पोमा बनेको छ, टुन्मुगुरुआ, १ 1800०० मिटर भन्दा धेरै अग्लो। यद्यपि यो एकदम आर्द्र ठाउँ हो सबै वर्ष मौसम राम्रो छ र प्रकृति यहाँ वरिपरि सबै भन्दा राम्रो उपहार हो।
ठाउँलाई बाओस डे अगुआ सान्ता भनिएको छ किनकि मानौं तपाईंले निकटताबाट ज्वालामुखीमा जानको लागि, तातो स्प्रि .्गहरू छन्। यो विश्वास गरिन्छ कि ती चमत्कारिक पानीहरू हुन्, कम्तिमा यस क्षेत्रमा डोमिनिकन प्रभावको समयदेखि, त्यहाँ उपस्थिति जुन शताब्दीयौंदेखि चलिरहेको छ। फाउन्डेशनको कुनै सहि मिति छैन, बरू यो आबादी र बढेको थियो जब मानिसहरू आइपुगे, भारतीयहरू, स्पानियर्ड्स, मेस्टीजोस।
बाओसको धर्मसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेको छ र प्राय: जसो हुने गर्छ, ज्वालामुखीको विस्फोटनको क्रममा एउटा चमत्कार समावेश छ जसले एक कुमारीलाई छोडेर लगभग सबै कुरा जलायो। चमत्कार र एकै समयमा ब्यापार घोषणा गर्न यसले धेरै लिदैन। छोटकरीमा, बाओसको सहरीकरण उन्नाइसौं शताब्दीमा भयो र १ 1949। earthquake को भूकम्प पछि व्यावहारिक रूपमा यसलाई फेरि निर्माण गर्नुपर्‍यो। यो ज्वालामुखी अझै सक्रिय छ ...
बाओसमा के गर्ने
ठिक छ, प्रकृतिको आनन्द लिनुहोस्, त्यसैले केवल प्रकृतिलाई प्रेम गर्ने पर्यटकहरू यहाँ आउँदछन्। आउटडोर खेलहरू। त्यो प्रस्तावमा केन्द्रित छ। त्यहाँ राफ्टिंग, क्यापनी, क्यानोइing, डोरी जम्पि,, पर्वतारोहण, पैदल यात्रा छ। एक हजार आयोजित टुरहरू जुन तपाईंलाई यहाँबाट लैजान्छन् यी सबै गतिविधिहरूको अभ्यास गर्दै जुन दिनको अन्त्यमा तपाईंलाई ओछ्यानबाट बाहिर जान्छ।
राफ्टिaधेरै रमाईलो छ। तिमी भिजेका छौ, तर रमाईलो छ। पास्ताजा नदीमा र्‍यापिडहरूको एक राम्रो श्रृंखला छ o सेतो पानी त्यसैले तपाइँ छिटो बीमा गर्नुभयो कक्षा III to IV, केही घण्टा को लागी प्याडल गर्न र हाम फाल्ने र भिजेको लागि एड्रेनालाईनको एक राम्रो खुराक। नदी सुन्दर छ, गाईडहरू विज्ञहरू छन्, परिदृश्य अद्भुत छ र सबै कुराको लागि सँगै आउँछन् उत्कृष्ट समय। दरले यातायात, उपकरण, गाईड र खाजा समावेश गर्दछ।
त्यहाँ धेरै एजेन्सीहरू छन् जुन यो यात्रा प्रस्ताव गर्दछ त्यसैले निर्णय गर्नु अघि धेरै प्रस्तावहरू जान्नु राम्रो हो।
बनाउनुहोस् क्यान्सर यदि तपाईंलाई हाइटहरू मन पर्छ भने यो सँधै उत्तम हुन्छ। बाओस उपत्यका धेरै राम्रो छ त्यसैले हिंड्नु यो एक उत्तम अनुभव हो। विचार महान छ। सामान्यतया, सवारीको लागत $ १ and र between २० को बीचमा हुन्छ तर यसले निर्भर भोजनमा समावेश गर्छ वा गर्दैन, त्यसमा निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि, वा तपाईंले अग्लो उड्न चाहानुभएको संख्या।
बाओस अमेजनको धेरै नजिक छ त्यसोभए यो विशाल र लोकप्रिय ज attrac्गलले तपाईंलाई आकर्षण गर्दछ तपाईंलाई यो जान्नको लागि राम्रो ठाउँ हो। अमेजन हो बाओसबाट एक घण्टा र आधा र यो सब भन्दा लोकप्रिय यात्रा हो। तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ एक दिन वा तीन वा चार दिनको यात्रा र अन्य अनुभवहरू बाँच्नुहोस्। यदि तपाईंलाई जंगल मनपर्दछ भने, एक बहु-दिन यात्रा उत्तम छ किनभने एकदिवसीय यात्रा धेरै व्यावसायिक हुन्छ (स्थानीय समुदायहरूको भ्रमण, केही सांस्कृतिक गतिविधि, छोटो क्यानो राइड, आदि)। तर एक वा धेरै रातको लागि रहन अनमोल छ।
तपाईंसँग जंगलको विशिष्ट जंगली जनावरहरू देख्न वा झरनाहरूमा नुहाउने धेरै अवसरहरू छन् जुन कसैले जान्दैन वा ठाउँको वनस्पति विज्ञानको बारेमा जान्न सक्दैन। यो होइन कि यी भ्रमणहरू कम पर्यटकीय छन् तर तिनीहरू अधिक पूर्ण छन्। तीन-दिनको यात्रा करिब is २०० हो यातायात, आवास, खाना र एक गाईडको साथ। वास्तवमा, यहाँ कुनै पनि टुर around १०० बाट सुरु हुन्छ। यो अमेजनको उत्तम संस्करण होईन, क्विटोबाट त्यहाँ उत्तम पैदल छन्, तर यो विकल्प हो कि बाओसले प्रस्ताव गर्दछ।
साथै तपाईं ATV सवारी गर्न सक्नुहुन्छ शहरले आफैलाई यसको लागि आश्चर्य उधार दिन्छ किनभने त्यहाँ यात्रा गर्न धेरै मार्गहरू छन्। «झरनाहरूको मार्ग the एक मध्ये एक उत्तम हो किनकि झरनाहरु अर्को भन्दा एक राम्रो छ। क्वाड्रसाइकल एक घण्टा द्वारा भाडामा छ र पक्कै पनि यो बाइक भन्दा महँगो छ। तपाई अरू के गर्न सक्नुहुन्छ? ठीक छ, नदी किनार, शान्त भागमा, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ कायाकि and र क्यानोइ।। यो पनि सकियो प्याराग्लाइडि,, जम्पि,, घोडा सवारी, पदयात्रा र माउन्टेन बाइकिंग.
बाओसमा अरू के गर्ने
अघिल्लो सेक्सनमा हामीले बाहिरी गतिविधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्यौं तर वास्तवमा बाओसले हामीलाई बढी दिन सक्दछन्। यो एक रंगीन छ स्थानीय बजार जुन पक्कै पनि भ्रमण गर्न लायक छ भित्र धेरै स्टॉलहरू छन् कि खाना बेच्ने हो र यो धेरै सस्तो छ सबै क्षेत्रीय खाना भनिन्छ llapachingoयो आलु पेनकेक्स, सास र अण्डा संग भुटेको चोरिजो हो जुन चामलको साथ परोसी छ र रमाइलो छ। त्यहाँ सुपर ताजा फलहरू र तरकारीहरू पनि छन्।
ट्री हाउस एक शानदार ठाउँ हो किनभने योसँग एक प्रभावशाली ह्यामॉक छ। तपाईं प्रवेश गर्न र रूखको शानदार काठको घर देख्नको लागि मात्र एक डलर तिर्नुहोस्, दुबै पखेटामा दुई पखेटा सहित, प्रत्येक र्‍याम्पको साथ तपाईं घाटीको सटीक रिममा स्विंग गर्न सक्नुहुन्छ। हृदयको बेहोशका लागि उपयुक्त छैन, हो। र निस्सन्देह, हामीले बिर्सनु हुँदैन किन बाओसलाई बाओस भनियो: औष्णिक पानी।
बाओससँग भूगर्भीय पोखरीहरू छन् जुन नजिकैको ज्वालामुखीको क्रियाकलापले तताइएको छ। धेरै बाहिरी गतिविधिहरूको साथ, तातो पानीमा डुबकी सुपर आराम र सिफारिस गरिएको छ। त्यहाँ धेरै राम्रो स्पा भनिन्छ लुना रन्टुन स्पा जुनसँग उत्तम विचारहरू छन्। तातो टबहरूको साथ चार पुलहरू प्रति व्यक्ति around २० देखि $ .० सम्म मूल्य। आराम गर्नुहोस्!
र अन्तमा, रातमा, हाम्रो सल्लाह तपाईले लिनु भएको हो रातको बस टुंगुरहुआ ज्वालामुखी र रातको बाओसको उत्कृष्ट दृश्यको आनन्द लिनुहोस्। यो चिवा बस हो र भाग्यको साथ तपाईं लाभा नदीको नजीक जान सक्नुहुन्छ। पैदल around डलर जति छ र हरेक रात बिभिन्न मार्गहरू छन्।
यदि तपाईं इक्वेडर भ्रमण गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, बाओसलाई तपाईंको रोडम्यापबाट नछुट्ट्याउनुहोस्। यो हाम्रो इच्छा र सिफारिश हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » इक्वेडर » इक्वेडरमा बाओस, लुकेको मोती
बार्सिलोनामा यी क्रिसमस दिनहरू गर्ने कामहरू